China CPAP smart batrị na ike ngosi na-ewu ụlọ na Lithium Batrị na-agbanye ọkụ 7.2V 13.6Ah ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Polymer
Nlereanya: PLM-NH2057QE34 Batrị Pack
Ngalaba Vol: 7.2v
Ike ikike onye otu: 13.6ah
Ndụ okirikiri: ＞ 500times
Waya & Njikọ: Hazie
Ikpe batrị: ỌZ PLZ PL PATARA
Nchaji okpomoku: 0 ° C ~ 45 ℃
Ihapu oke okpomoku: 20 ° C ~ 60 ° C
Nchekwa nchekwa: - 20 Celsius C ~ 60 ℃
Nchedo okpomoku: 65 ℃ + 5 ℃
Okwu Mmalite nke PLM-NH2057QE34
Batrị Smart nwere ikike ngosipụta wuru na batrị Lithium batrị 7.2V 13.6Ah. Enwere ike iji batrị batrị, igwe ikuku na-eku ume, batrị ， batrị ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ dabara adaba.Ọkwa BMS nwere ikike dị elu.Smart BMS wuru n'ime, nkwukọrịta I2C, batrị nwere ngosipụta ikike.Made nke Samsung 18650 sel sel batrị ogologo ndụ.Battery nwere ike ịnabata ROHS, UL, CE, CB, UN38.3, MSDS, IEC62133, akwụkwọ KC dị ka ihe ndị ahịa chọrọ.
Oke ngwaahịa （nkọwapụta） nke PLM-NH2057QE34:
.Dị Mkpokọta batrị 7.2v li-ion
Nha 23 * 78 * 151mm
Usoro Chemical Li-ion
Ndụ okirikiri 1000 ugboro
Ibu ibu 1Kg / PC
Ihe ngwugwu Ihe ngwugwu Nke Onwe
OEM / ODM Nke anabatara
Njirimara Ngwa na Ngwa nke NH2057QE34
1, Dynamic balance technology;
2, ihe eji egbochi mmiri;
3, Usoro njikọta ntụkwasị obi dị elu;
4, Nnukwu ọla kọpa ugbu a na ihe eji eme nickel;
5, Nkwukọrịta iche ike dị ala;
6, Unique thermal management imewe;
Ihe di iche iche eji eme ihe bu ihe mberede nke ike, nzoputa na ihe enyemaka nye mpu oku, n’azu ngwa eletriki eletriki eletriki, ihe elektrọnik ogwu, ihe ndi elekere eletriki. Oke onodu nke ike okpu bu ngwa oru, TV, ihe nlere eletriki, komputa, friji. ngwa oru ndi ozo di iche iche .Ighaputa ihe eji eme oku, ihe oku oku, oriọna eletriki na ihe ndi ozo .aka akuko di iche: ikike igba elektrik: n’azu ulo oku, n’igwe ike n’azu, ngwa elektrọnik ogwu: CPAP ventilator, obere ike ndi ozo nke ogwu. friji ụgbọ ala, mgbapụta ụgbọ ala, jakị ụgbọ ala, ụgbọ ala ịsa ahụ.
4.Production na ngwá nkọwa egosi
Nke gara aga: Ihe mbụ batrị 24V 13.5Ah Li-ion batrị maka Neonatal Incubator OEM & ODME
Osote: Factory price Mankeumman mma 22.2v 900mah analysis ngwaọrụ X-ray batrị mkpọ
Mmepụta 18V 2.0Ah Li-ion Dochie Eletriki D ...
Ahaziri citycoco skuuta Harley ọgba tum tum ...
24V 13.5Ah Li-ion Batrị Batrị Na-arụ Ọrụ ...
Mpempe batrị Lifepo4 24V 20AH Lithium ion maka R ...
IP67 7.4V 2200mAh Lithium ion batrị maka weara ...